दुई दशकसम्म अनुत्तरित एक प्रश्न : प्राण गैसकेका र हत्या आरोप लागेका दीपेन्द्रलाई किन बनाइयो राजा ? - अन्वेषी मिडिया प्रा .लि.
आखिर बाँच्ने सम्भावना नै नभएका दीपेन्द्रलाई किन बनाइयो राजा ? यो प्रश्न २० वर्षसम्म पनि अनुत्तरित नै छ ।
दरवार हत्यकाण्ड भएको राति न्यरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटा नर्भिक अस्पतालमा विरामी जाँच्दै थिए । अचानक विना इजाजत एकजना मानिस ढोका ठेलेर उनको कोठामै पुग्यो । देवकोटाले वोल्न भ्याइकै थिएनन् । उसले भन्योे–डाक्टर साप ठूलो दुर्घटना भएको छ, तपाईंको आवश्यकता छ, मसँग हिँडिहाल्नुस्’ । डा. देवकोटा उसैको मोटरमा बसे । थापाथलीबाट कालिमाटी, ताहचल हुदै मोटर छाउनी अस्पताल तिर मोडियो । देशसञ्चार अनलाइनलाई डा. देवकोटाले भनेका छन्–मैले त्यति छिटो कसैले मोटर हाँकेको देखेकै थिइन । आर्मी अस्पताल पुग्दाखेरि रिंगटाले बान्ता भएर आफै बिरामी भए जस्तो अवस्थामा थिएँ म ।
अस्पातल पुगे पछि मात्र डा. देवकोटालाई दरवारमा गोली चलेको थाहा भयो । सैनिक अस्पतालमा राजा रानी सहित राजपरिवारका सदस्यलाई लहरै राखिएको थियो । पहेँलै रंगको कुर्ता सुरुवाल लगाएका राजा वीरेन्द्रको अनुहार पनि पहेँलो भैसकेको थियो । डाक्टरले नाडी छामे । राजाको प्राण थिएन । रानी ऐश्वर्यको टाउको उडेको थियो ।
तत्काल उनको अप्रेशन गरियो र लगत्तै एमआरआई पनि । रिपोर्ट हेरेपछि डा. देवकोटा उनी नबाँच्ने निष्कर्षमा पुगि सकेका थिए । टाउकामा लागेको गोली दुईटै डाइनकेफ्लन ड्यामेज (दिमाग) गरेर निक्लेपछि मान्छे बाँच्ने सम्भावना जिरो छ। चिकित्सा विज्ञानमा यस्तो घटनामा परेका कोही पनि बाँचेको रेकर्ड थिएन । डा. देवकोटाले भनेका छन् –मैले बुझेँ, दीपेन्द्र सरकार बाँच्ने जिरो प्रतिशत चान्स छ।
२०५८ जेठ १९ गते रातिको कुरा हो । राजा रानीको मृत्यु भैसकेको थियो । तर राजा कहिल्यै मर्दैनन् भन्ने मान्यता अनुसार नयाँ राजाको चयन नहुदासम्म मृत्युको घोषणा भएको थिएन । राजपरिषद् बैठकले २० गते युवराज दीपेन्द्रलाई १९ गते रातिबाटै राजा भएको घोषणा ग-यो । यस प्रसंगमा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लेखकसंग भनेका छन्–राजा रानी र युवराजको लास एउटै ठाँउमा राखिएको थियो । युवराज दिपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरिए पनि उनको मृत्यु भैसकेको थियो ।
राजा घोषणा गरिएको पर्सी पल्ट नयाँ राजा दीपेन्द्रको मृत्यु भएको घोषणा गरियो । उनका काका ज्ञानेन्द्र राजा बने । संयोग नै मान्नु पर्छ जीवनकालमा उनी दुई पटक राजा भए । बाजे राजा त्रिभुवनले २००७ सालमा भारतीय दुतावासमा शरण लिएपछि बाबु महेन्द्र, दाजु वीरेन्द्र भन्दा अघि श्रीपेच पहिरिएका उनलाई भतिजा दीपेन्द्रको मृत्यु पछि पनि राजा हुने सौभाग्य प्राप्त भयो ।